Perfect ဟက်ထရစ်ရှင် ပူလီဆစ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လမ်းပတ် ဘာတွေ ပြောခဲ့လဲ ? - SPORTS MYANMAR
Perfect ဟက်ထရစ်ရှင် ပူလီဆစ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လမ်းပတ် ဘာတွေ ပြောခဲ့လဲ ?
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အမေရိကန် လက်ရွေးစင် တောင်ပံ ကစားသမား ခရစ်တီယန် ပူလီဆစ် ဟာ မနေ့ည က ကစား သွားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် မှာ ဘန်လေ အသင်း ကို ဟက်ထရစ် သွင်းယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါဟာ ပူလီဆစ် ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကစားသမား ဘဝ ပထမဆုံး ဟက်ထရစ် လည်း ဖြစ်သလို ၊ ဒီ ဟက်ထရစ် ဟာ ဘယ်ခြေ ၊ ညာခြေ ၊ ခေါင်းတိုက်ဂိုး တွေနဲ့ ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်လို့ ပြီးပြည့်စုံ တဲ့ ဟက်ထရစ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တလလုံး ပွဲထွက်ခွင့် တွေ ပျောက်ဆုံး ခဲ့ပေမယ့် အခုအခါ မှာ အံ့မခန်း ခြေစွမ်း တွေနဲ့ အတူ ပြန်လာ နိုင်ခဲ့တဲ့ ပူလီဆစ် အပေါ် လမ်းပတ် က ” ကျွန်တော် ဟာ ခရစ်တီယန် အတွက် အမှန်တကယ် ဝမ်းသာ မိပါတယ် ။ ခရစ်တီယန် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို မြင့်မားတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး နဲ့ ရောက်ရှိ လာခဲ့တာ ဖြစ်လို့ ၊ အမေရိကန် ကြယ်ပွင့် ၊ လက်ရွေးစင် အသင်း ခေါင်းဆောင် လည်း ဖြစ်တာကြောင့် သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျား မှာ အမြဲလိုလို ပြောစရာ ဖြစ်နေရပါတယ် ။ ”
” ဒီနေ့ပွဲ မှာ ခရစ်တီယန် လုပ်ပြ ခဲ့တဲ့ အရာတွေ အတွက် ကျွန်တော် ဝမ်းသာ အားရ မိပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ နောက်ခံ အကြောင်းအရင်း တွေ ၊ ဘယ်လို ဖိအား တွေ အောက်မှာ ရုန်းကန် ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း တွေ အကုန် ကျွန်တော် သိထားပြီးသားပါ ။ နောက်ပြီး သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ မှာ လက်ရွေးစင် အသင်း နဲ့ အတူ ကွန်ကာကပ်ဖ် ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကို ဆင်နွှဲ ခဲ့ပေမယ့် နားရကမ တပတ်ပဲ ယူပြီး ကျွန်တော် တို့နဲ့ လာရောက် ပူးပေါင်း ခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက် ပရီးမီးယားလိဂ် လို ပြိုင်ပွဲကြီး တခု ကို စတင် ထိတွေ့ ခဲ့ရတာကြောင့် သူ့အတွက် ဖိအား တွေ စဝင် ခဲ့ရပါတယ် ။
” ကျွန်တော့ ဖက်ကတော့ သူ့ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကစားခွင့် မိနစ် အနည်းငယ် လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခွင့်ပြု ပေးနိုင်ဖို့ အမြဲ ရှာဖွေ ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ် ။ သူဟာ ဒီရာသီ မှာ ကျွန်တော် တို့ အသင်း ရဲ့ ပွဲတချို့ ကို ကစား ခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့ဟာ ပြိုင်ပွဲ ပေါင်းစုံ ကို ယှဉ်ပြိုင် ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အသင်းသားတိုင်း ကို လိုအပ်ပါတယ် ။ အသင်းသားတိုင်း ကို ပွဲထွက်ခွင့် အတွက် အမြဲ ကြိုးစား စေချင်ပါတယ် ။ ခရစ်တီယန် ဟာ လတ်တလော မှာ ဒီလို နည်းစနစ် တွေကို ကျင့်သုံး နေတာပါ ။ ”
” အရန်ခုံ မှာ ထိုင်နေရတဲ့ အခါလည်း သူ လေ့လာ နေခဲ့တယ် ၊ အခုဆို ဒီနေ့ ပွဲမှာ တပွဲလုံး အပြည့် ကစားခွင့် ရခဲ့ပါပြီ ။ ဒါ့အပြင် ပွဲ အနိုင် ရလဒ် ကို အဆုံးအဖြတ် ပေးခဲ့တဲ့ အံ့သြဖွယ် စွမ်းဆောင်ရည် ကိုပါ သူ ထပ်ပြ နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဟာ ခရစ်တီယန် ဘယ်လောက် ထိ တော်လဲ ဆိုတာ သိထားပြီးသားပါ ။ အခုမှ သူဟာ ၂၁ နှစ် ပြည့်တာ ဖြစ်လို့ သင်ယူစရာ တွေ ၊ တိုးတက်ဖို့ အဖက်ဖက် က လိုအပ် နေပါတယ် ။ ဒါဟာ လူငယ် ကစားသမား တွေ အားလုံး အတွက် အတူတူပါပဲ ။ ”
” ခရစ်တီယန် ဖို့ တိုးတက်မယ့် နေရာ တွေမှာ လိုအပ်ချက် တချို့ ရှိနေဆဲပါ ။ ဒီ နေရာ တွေမှာ သူ့ကို ပိုကောင်း လာစေဖို့ ကျွန်တော် တွန်းပို့ နေတာ သူလည်း သိပါလိမ့်မယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် အတွင်း က လေ့ကျင့်ပုံ တွေ ၊ လူစားဝင်ခွင့် ရတဲ့ အခါ ကြိုးစားပုံ တွေက လူတိုင်း ကို သူ့ရဲ့ အရည်အသွေး တွေ အားလုံး ထုတ်ပြဖို့ လှမ်းခေါ် နေသလိုပါပဲ ။ ဒီနေ့ ပွဲမှာ ကျွန်တော့ သူ့ရဲ့ ကစားပုံ ကို အရမ်း ကျေနပ် ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ် ။ ဒီလို စွမ်းဆောင်ရည် မျိုး အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား တွေ ဆီကနေ မြင်တွေ့ ချင်နေတာပါ ။ ”
” ဟုတ်ပါတယ် ။ ခရစ်တီယန် မှာ အလိမ်အခေါက် အပိုင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါရမီ ပါလာတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် တိတိကျကျ လက်ခံ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် အကြောင်း ပြောတဲ့ အခါ ကျွန်တော် တို့ဟာ ကြံ့ခိုင်မှု အပိုင်း နဲ့ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ကစားနိုင်တာ ကို ကြည့်ကြပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ဒီနေ့ ဘန်လေ နဲ့ ရင်ဆိုင် ရသလိုပေါ့ ။ သူ့ ပင်ကို စွမ်းရည် နဲ့ ဘောလုံး ရွေ့လျား တာတွေ ၊ ခန္ဓာကိုယ် အယိမ်းအနွဲ့ တွေက ပြိုင်ဖက် နောက်တန်း ကို ဖရိုဖရဲ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် ။ ”
” ဒီလို ဟန်ချက်မျိုး ရှိတဲ့ ကစားသမား တွေ ဆိုရင် ပရိသတ် တွေ ပိုပြီး ကြည့်ပျော် ကြပါတယ် ။ ပထမ သွင်းဂိုး ကို ကြည့်ရင် ခရစ်တီယန် ဟာ ဂိုးမသွင်းခင် တချက် ရပ်လိုက်တယ် ၊ ပြိုင်ဖက် နောက်ခံလူ ကို လှည့်စား လိုက်တယ် ၊ ပြီးတော့ ပြိုင်ဖက် ကို ကျော်ထွက်ပြီး လှလှပပ ဂိုးသွင်းယူ ခဲ့တာပါ ။ တကယ်လည်း ချီးကျူးထိုက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးပါ ။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီနေ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကြောင့် သူ့ရဲ့ ယုံကြည်မှု တွေ ပို တိုးတက်လာမယ် လို့ မျှော်လင့် မိပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
Perfect ဟကျထရဈရှငျ ပူလီဆဈ နဲ့ ပတျသကျပွီး လမျးပတျ ဘာတှေ ပွောခဲ့လဲ ?
ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ အမရေိကနျ လကျရှေးစငျ တောငျပံ ကစားသမား ခရဈတီယနျ ပူလီဆဈ ဟာ မနညေ့ က ကစား သှားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ မှာ ဘနျလေ အသငျး ကို ဟကျထရဈ သှငျးယူ နိုငျခဲ့ပါတယျ ။ ဒါဟာ ပူလီဆဈ ရဲ့ ပရျောဖကျရှငျနယျ ကစားသမား ဘဝ ပထမဆုံး ဟကျထရဈ လညျး ဖွဈသလို ၊ ဒီ ဟကျထရဈ ဟာ ဘယျခွေ ၊ ညာခွေ ၊ ခေါငျးတိုကျဂိုး တှနေဲ့ ရရှိခဲ့တာ ဖွဈလို့ ပွီးပွညျ့စုံ တဲ့ ဟကျထရဈ ဖွဈခဲ့ပါတယျ ။
ပွီးခဲ့တဲ့ တလလုံး ပှဲထှကျခှငျ့ တှေ ပြောကျဆုံး ခဲ့ပမေယျ့ အခုအခါ မှာ အံ့မခနျး ခွစှေမျး တှနေဲ့ အတူ ပွနျလာ နိုငျခဲ့တဲ့ ပူလီဆဈ အပျေါ လမျးပတျ က ” ကြှနျတျော ဟာ ခရဈတီယနျ အတှကျ အမှနျတကယျ ဝမျးသာ မိပါတယျ ။ ခရဈတီယနျ ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး ကို မွငျ့မားတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေး နဲ့ ရောကျရှိ လာခဲ့တာ ဖွဈလို့ ၊ အမရေိကနျ ကွယျပှငျ့ ၊ လကျရှေးစငျ အသငျး ခေါငျးဆောငျ လညျး ဖွဈတာကွောငျ့ သူနဲ့ ပတျသကျပွီး လူတှရေဲ့ ပါးစပျဖြား မှာ အမွဲလိုလို ပွောစရာ ဖွဈနရေပါတယျ ။ ”
” ဒီနပှေဲ့ မှာ ခရဈတီယနျ လုပျပွ ခဲ့တဲ့ အရာတှေ အတှကျ ကြှနျတျော ဝမျးသာ အားရ မိပါတယျ ။ သူ့ရဲ့ နောကျခံ အကွောငျးအရငျး တှေ ၊ ဘယျလို ဖိအား တှေ အောကျမှာ ရုနျးကနျ ခဲ့ရတဲ့ အကွောငျး တှေ အကုနျ ကြှနျတျော သိထားပွီးသားပါ ။ နောကျပွီး သူဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီ မှာ လကျရှေးစငျ အသငျး နဲ့ အတူ ကှနျကာကပျဖျ ဖလား ပွိုငျပှဲ ကို ဆငျနှဲ ခဲ့ပမေယျ့ နားရကမ တပတျပဲ ယူပွီး ကြှနျတျော တို့နဲ့ လာရောကျ ပူးပေါငျး ခဲ့ပါတယျ ။ အဲ့ဒီနောကျ ပရီးမီးယားလိဂျ လို ပွိုငျပှဲကွီး တခု ကို စတငျ ထိတှေ့ ခဲ့ရတာကွောငျ့ သူ့အတှကျ ဖိအား တှေ စဝငျ ခဲ့ရပါတယျ ။ ”
” ကြှနျတော့ ဖကျကတော့ သူ့ကို အတတျနိုငျဆုံး ကစားခှငျ့ မိနဈ အနညျးငယျ လောကျပဲ ဖွဈဖွဈ ခှငျ့ပွု ပေးနိုငျဖို့ အမွဲ ရှာဖှေ ကွိုးစား ခဲ့ပါတယျ ။ သူဟာ ဒီရာသီ မှာ ကြှနျတျော တို့ အသငျး ရဲ့ ပှဲတခြို့ ကို ကစား ခဲ့ပွီးပါပွီ ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော တို့ဟာ ပွိုငျပှဲ ပေါငျးစုံ ကို ယှဉျပွိုငျ ရမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ အသငျးသားတိုငျး ကို လိုအပျပါတယျ ။ အသငျးသားတိုငျး ကို ပှဲထှကျခှငျ့ အတှကျ အမွဲ ကွိုးစား စခေငျြပါတယျ ။ ခရဈတီယနျ ဟာ လတျတလော မှာ ဒီလို နညျးစနဈ တှကေို ကငျြ့သုံး နတောပါ ။ ”
” အရနျခုံ မှာ ထိုငျနရေတဲ့ အခါလညျး သူ လလေ့ာ နခေဲ့တယျ ၊ အခုဆို ဒီနေ့ ပှဲမှာ တပှဲလုံး အပွညျ့ ကစားခှငျ့ ရခဲ့ပါပွီ ။ ဒါ့အပွငျ ပှဲ အနိုငျ ရလဒျ ကို အဆုံးအဖွတျ ပေးခဲ့တဲ့ အံ့သွဖှယျ စှမျးဆောငျရညျ ကိုပါ သူ ထပျပွ နိုငျခဲ့ပါတယျ ။ ကြှနျတျော ဟာ ခရဈတီယနျ ဘယျလောကျ ထိ တျောလဲ ဆိုတာ သိထားပွီးသားပါ ။ အခုမှ သူဟာ ၂၁ နှဈ ပွညျ့တာ ဖွဈလို့ သငျယူစရာ တှေ ၊ တိုးတကျဖို့ အဖကျဖကျ က လိုအပျ နပေါတယျ ။ ဒါဟာ လူငယျ ကစားသမား တှေ အားလုံး အတှကျ အတူတူပါပဲ ။ ”
” ခရဈတီယနျ ဖို့ တိုးတကျမယျ့ နရော တှမှော လိုအပျခကျြ တခြို့ ရှိနဆေဲပါ ။ ဒီ နရော တှမှော သူ့ကို ပိုကောငျး လာစဖေို့ ကြှနျတျော တှနျးပို့ နတော သူလညျး သိပါလိမျ့မယျ ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျသတ်တပတျ အတှငျး က လကေ့ငျြ့ပုံ တှေ ၊ လူစားဝငျခှငျ့ ရတဲ့ အခါ ကွိုးစားပုံ တှကေ လူတိုငျး ကို သူ့ရဲ့ အရညျအသှေး တှေ အားလုံး ထုတျပွဖို့ လှမျးချေါ နသေလိုပါပဲ ။ ဒီနေ့ ပှဲမှာ ကြှနျတော့ သူ့ရဲ့ ကစားပုံ ကို အရမျး ကနြေပျ ပီတိ ဖွဈမိပါတယျ ။ ဒီလို စှမျးဆောငျရညျ မြိုး အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ ကစားသမား တှေ ဆီကနေ မွငျတှေ့ ခငျြနတောပါ ။ ”
” ဟုတျပါတယျ ။ ခရဈတီယနျ မှာ အလိမျအခေါကျ အပိုငျး နဲ့ ပတျသကျပွီး ပါရမီ ပါလာတယျ ဆိုတာ ကြှနျတျော တိတိကကြ လကျခံ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ အကွောငျး ပွောတဲ့ အခါ ကြှနျတျော တို့ဟာ ကွံ့ခိုငျမှု အပိုငျး နဲ့ တှနျးတှနျးတိုကျတိုကျ ကစားနိုငျတာ ကို ကွညျ့ကွပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ ဒီနေ့ ဘနျလေ နဲ့ ရငျဆိုငျ ရသလိုပေါ့ ။ သူ့ ပငျကို စှမျးရညျ နဲ့ ဘောလုံး ရှလြေ့ား တာတှေ ၊ ခန်ဓာကိုယျ အယိမျးအနှဲ့ တှကေ ပွိုငျဖကျ နောကျတနျး ကို ဖရိုဖရဲ ဖွဈစခေဲ့ပါတယျ ။ ”
” ဒီလို ဟနျခကျြမြိုး ရှိတဲ့ ကစားသမား တှေ ဆိုရငျ ပရိသတျ တှေ ပိုပွီး ကွညျ့ပြျော ကွပါတယျ ။ ပထမ သှငျးဂိုး ကို ကွညျ့ရငျ ခရဈတီယနျ ဟာ ဂိုးမသှငျးခငျ တခကျြ ရပျလိုကျတယျ ၊ ပွိုငျဖကျ နောကျခံလူ ကို လှညျ့စား လိုကျတယျ ၊ ပွီးတော့ ပွိုငျဖကျ ကို ကြျောထှကျပွီး လှလှပပ ဂိုးသှငျးယူ ခဲ့တာပါ ။ တကယျလညျး ခြီးကြူးထိုကျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျမြိုးပါ ။ ကြှနျတျော ကတော့ ဒီနေ့ စှမျးဆောငျရညျ ကွောငျ့ သူ့ရဲ့ ယုံကွညျမှု တှေ ပို တိုးတကျလာမယျ လို့ မြှျောလငျ့ မိပါတယျ ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။